मैले कोरोना देखिन… « Farakkon
आज मेरो मुड अर्कै छ । तपाइले किन भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो मैले पछिल्लो प्याराग्राफमा बताउने छु । धेरै स्थानमा आज घुम्ने अवसर मिल्यो, किनकि हामी चल्न खोजेका थियौं, रुक्न होइन । अस्तीको लेखमा मैले देखें भन्ने थियो, तर आज मैले नदेखेको लेख्दैछु । नदेखेको कसरी लेख्छौ भन्नेहरु होलान, तर मलाइ उनिहरुसंग कुनै गुनासो छैन । कहिलेकाहि नदेखेको पनि लेख्नुपर्छ ।
वहानै विश्वकर्मा पुजाका दिन शर्मा एलाइट निर्माण कम्पनीको गाडि विश्वकर्मा पुजाको निम्तो दिन आयो । गाडिसहित आएकाले मैले अस्वीकार गरीन, किनकि गतिलो पुल निर्माण र तोकिएको समयभन्दा चांडै निर्माण सम्पन्न गर्ने उदेश्यकासाथ लाडिरहेका थिए । यातायात व्यवसायीहरु जसरी पनि गाडि चलाउन लागेका थिए । विश्वकर्मा त्यसैले पुजिएका थिए, किनकि विश्वकर्मा वावाको आसिर्वादमा धेरै श्रमिकहरु आक्षित छन् । विश्वकर्मा वावाकै आशिर्वादले धेरै मज्दुरहरुको भोक मेटिएको छ । व्यवसायीहरुको रोजिरोटि चलेको छ ।
हो मैले देखिन भन्दा तपाइहरुलाइ अचम्म लाच्न सक्छ, त्यो तथ्यसहित लेखदै छु, मैले लेखेको हरेक शव्दपछि तपाइहरुलाइ तान्न चाहन्छु, यदि चाहनुहुन्न भने, यतिमै विश्राम लिन पनि तपाइहरुलाइ छुट छ ।
तर मैले आज विहिवार कोरोना देखिंन । शान्तिनगरमा पनि देखिन, घोराहीमा पनि देखिन, तुलसीपुरमा पनि देखिन, अनि दाङ जिल्लाका सवै पालिकामा देखिन ।
सायद सवै पालिका आज मिठो निद्रामा हुने छन्, किनकि आज दाङ जिल्लामा कसैलाइ कोरोना नदेखिएको जिल्ला श्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्शन कमल चन्दे पुष्टि गरेका छन् ।
हो आज मेरो मुड जस्तो थियो, कमल चन्दको पनि मुड त्यस्तै थियो, उनको अभिव्यक्ति थियो, आज कुनैपनि जिल्लाबासीमा कोरोना संक्रमणको पुस्टी भएको खवर छैन । आहा, विश्वकर्मा पुजाका दिन यस्तो अवसर । मैले सोंचिरहेको छु, अव फेरी विश्वकर्मा वावाले आफ्ना मज्दुरहरुलाइ कोरोना लाग्नबाट बचाउने छन् । इच्छाशक्ति प्रदान गर्ने छन । अनि आत्मविश्वास बढाउने छन् । आनिवानी र खानपानमा पनि सुधार ल्याउन अनुयायीहरुलाइ सिकाउने छन् ।
किनकि अव संघिय सरकारको विश्वास धेरै नेपालीलाइ छैन, प्रदेश सरकारको विश्वास पनि छैन, अनि स्थानिय पालिका घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरपिताको पनि विश्वास छैन । किनकि सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा अहिलेसम्म जेजति बजेट खर्च गर्यो, त्यो अर्थहिन सावित भएको छ, उपलव्धि विहिन भएको छ ।
अवत सरकारले परीक्षणनै नगर्ने उद्घोष गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रणमा ७ सय ५० रुप्पेमा खरीद गरेको मास्क अहिले बजारमा ७० रुप्पेमा आउदा सरकार छटपटाएको छ । २५ हजार रुप्पेमा पिसिआर परीक्षण हुने दावी गरेको सरकार आफैले दुइहजार रुपैयामा परीक्षण घोषणा गरेको छ । सायद मलाइ लाग्छ, तपाइहरुपनि नआत्तिनुहोला अवको दुइ महिना पनि ५ सय रुप्पेमा पिसिआर परीक्षण हुनेछ ।
हो मैले फेरी लेख्दालेख्दै फेरी कोरोनाकै कुरा लेखेछु, त्यसमा म तपाइ पाठकहरुसंग क्षमायाचना गर्दछु । किनकि मैले आज कोरोना देखेको छैन । किनकि दाङका कुनैपनि पालिकाले कोरोना परीक्षण गर्न छाडेका छन् ।
परीक्षणनै नगरे कोरोना देख्न सकिन्छ र? साधुवाद छ, स्थानिय पालिकाहरुलाइ, सधै दाङमा संक्रमितको समाचार लेख्ने अवसर नदिनुहोला, त्यसकालागी परीक्षणै नगरे हाइसन्चो .। किनकि दाङ जिल्लामा पालिकाहरुले संभावित संक्रमितको स्वाव संकलननै गरेका थिएनन् ।
वीपीलाई बुझौं र अनुशरण गरौं
ढिस्कोले पुर्दा २ महिलाको मृत्यु, २ घाइते
शनिवार २२२५ नयाँ संक्रमित थपिए , १३ जनाको मृत्यु
कोईलाबास नाका क्षेत्रबाट भरुवा बन्दुक बरामद
डा. बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीलाई कोरोना सङ्क्रमण